रोचक – Patrika Nepal
२० वर्षसम्म हजुर-आमाको कवाडी भनेर बेवास्ता गरे,’एक दिन कपडा हटाएर हेर्दा… अमेरिकामा एक कलेज विद्या’र्थीले लामो सम’यसम्म हजुरआ’माको घरको ग्यारेज’लाई क’वाडीको थुप्रो सम्झिए । तर, एक दिन उनले यो ग्यारेज खोले’र हेर्दा उनको भाग्य खुल्यो ।एरिगन नामका यी विद्यार्थीले एक ब्लगमा भने अनु’सार उनलाई २० वर्षदेखि ला’ग्थ्यो कि यो ग्यारेज भित्र क’वाडी मात्र छ । तर, जब उनले ग्यारेज खो’लेर हेरे त्यहाँ’भित्र त्यो सम’यका सबैभन्दा लग्जरी स्पोर्ट कार थिए ।हजुरआमाको कवाडी भनेर २० वर्षसम्म बेवास्ता गरे, एक दिन कपडा ह’टाएर हेर्दा… एरिग’नका अनुसार उनको घरमा २ ग्यारेज छन् । त्यसैले उनले पुरानो ग्यारेज’तर्फ ध्यान दिएनन् । त्यो दिन थाहा छैन किन उनलाई त्यहाँ हेर्ने इच्छा भयो । जब उनले गेट खो’ले त्यहाँ कपडाले ढाकिएका २ का:र देखिए । जब उनले कपडा हटाए उनको खुसी’को ठेगान रहेन । त्यहाँ त्यति’बेलामा लेम्बोर्गिनी र फ
वास्तुशास्त्र अनुसार परिवारका सदस्य यदि बिरामी र तनावमा भइरहन्छन् भने यसको कारण घरको मुख्यद्वार पनि हुनसक्छ । मुख्यद्वारसँग जोडिएका वास्तु दोषका कारण घरका सदस्य शारिरिक, मानसिक र आर्थिक रुपमा विचलित हुन्छन् । वास्तुशास्त्रका विभिन्न ग्रन्थमा घरको मुख्यद्वारसँग सम्बन्धित विशेष जानकारी दिइएको हुन्छ जसबारे ध्यान दिँदा तनाव, रोग र अनावश्यक खर्चबाट बचाउन सकिन्छ । यसका साथै घरमा शान्ती कायम रहन्छ ।वास्तु शास्त्रमा यस्ता पाँच दोषबारे बताइएको छ जसका कारण घरमा गरिबी भित्रिन्छ । १. घरको मुख्य ढोका काठको हुनुपर्छ र बाहिरतर्फ खोलिनुपर्छ । भित्रतिर खोलिने ढोकाका कारण घरका मूलीले तनाव र विभिन्न रोगको सामना गर्नुपर्छ । धातुको ढोका राख्दा धोका पाउने सम्भावना अत्यधिक हुन्छ । यद्यपी, फेंग सूईले भने घरको ढोका भित्रतिर नै खोलिएको राम्रो बताउँछ । फेंग सूईका अनुसार घरको ढोका भित्रतिर खोलिनुको अर्थ आमन्
दिल तोड्न माहिर हुन्छन् यी राशिका व्यक्ति, दोस्रोको भावनासँग गर्छन खेलवाड
काठमाडौँ । आजको यो समयमा प्रेममा नपर्ने मानिस सायद नै होलान्। यो समयमा प्रेम गर्नु फेशन जस्तै भैसकेको छ। केहि मानिस साँचो प्रेम गर्छन् भने कोहि झुटो र देखावटी। आजभोली मायामा धोका पनि धेरै हुन्छ। ज्योतिषशास्त्रको अनुसार ती राशिका मानिसहरु अरुको दिल तोड्न माहिर हुन्छन्। मेष राशि : मेष राशि भएका व्यक्तिहरु अरुछप्रति छिटै आकर्षित हुन्छन्। यिनीहरू प्रेमको मामलामा त्यति गम्भीर हुँदैनन् । यिनीहरु अरुप्रति जति छिटै आकर्षित हुन्छन् त्यति नै छिटो मनबाट आकर्षण हट्छ। प्रेमको मामलामा पनि छिटै मनबाट प्रेमको भावना हट्छ । यिनीहरु कसैले उक्साएको भरमा अथवा आफ्नो पक्षमा केहि कुरा भएन भने आफ्नो प्रेमीलाई धोका दिन पनि पछि हट्दैनन्। मिथुन राशि : मिथुन राशिका व्यक्तिहरू उनीहरूको दोहोरो व्यक्तित्वका लागि चिनिन्छन् र उनीहरूको यहि स्वभावले उनीहरूको सम्बन्धमा पनि असर पार्छ। कहिलेकाँही यिनीहर
हाम्रा सामान्य व्यवहारले गर्छन् अचम्मका भविष्यवाणी !
शास्त्र र पुराणहरूमा हाम्रो दैनिक जीवनसँग जोडिएका कुरा र बानीहरूको उल्लेख गरिएको छ। त्यसलाई सामान्य ठानेपनि तिनीहरूले वास्तवमा हाम्रो भविष्यलाई इंगित गरिरहेका हुन्छन् । हामीलाई राम्रो हुन्छ कि नराम्रो भन्ने विषय हामी अज्ञानतावश बुझ्न पाउँदैनौं।यी घटनालाई बुझेर अनि हाम्रा बानीमा सुधार ल्याएर हामी आफ्नो भविष्य सुधार्न सक्छौं। पर्वको दिन: एक वर्षमा आउने पर्वहरूको विषयमा रमाइलो भविष्यवाणी छ। दिनहरूको क्रमसँग यो जोडिएको छ। यसअनुसार होली, नयाँ वर्ष र तिहार क्रमशः शनिवार, आइतवार र मंगलवार प–यो भने देशमा महामारी फैलिन सक्छ। बिहानको बानी: शास्त्रलाई मान्ने हो भने बिहान उठ्नेबित्तिकै व्यक्तिले राति राखेको पानी पिएर आफ्नो हत्केला हेरेमा ठूलो रोग उसलाई लाग्न पाउँदैन। महिना अनुसार निषेध गरिएका खानेकुरा हरेक महिनामा स्वास्थ्यका लागि केही कुराहरू खान निषेध छ । वैशाखमा तेल, जेठमा घिउ, असारम
काठमाडौँ । नेपालमा आफ्नो आफ्नो धर्म ,परम्परा तथा सस्कृति अनुसार फरका फरक किसिमको रुढीबादी मान्यताहरु रहेका छन् । कसैले के गर्नु नहुने , कुन दिन के गर्न नहुने भन्ने जस्ता मान्यताहरु रहेका छन् ।त्यसैसगँ सम्बधित आज हामी हप्ताको ७ बार मध्ये कुन बार के गर्नु हुन्छ र के गर्नु हुदैन् भनने विषयमा कुरा गर्न गइरहेका छौ । यसै अनुसार तपाइको घरमा अग्रजहरुले मंगलबार, बिहिबार अनि शनिबार कपाल काट्नु हुन्न भनेको त सुन्ने गरेकै छौं होला ।तर तपाईलाई यो बारेमा ख्याल नै गर्नुभएको थिएन् होला । त्यसैले आज हामी यसको रहस्य खोल्न गइरहेका छौ । हिन्दु धर्म ग्रन्थका अनुसार हप्ताको ३ बार नङ र कपाल काट्न नहुने कुरा बताइएको छ । के छ कारण हेर्नुस् । सुरुवातमा मगंलबारबाट हेर्नुस् धर्म ग्रन्थका अनुसार यदि तपाई मंगलबार नङ काट्नु हुन्छ भने तपाईको परिवारमा मन मुटाब बढ्न सक्छ भने तपाईको शरीरमा रक्त नाली सम्बन्धि समस्या ब
काठमाडौँ । राती सुतेको समयमा सबैजसो व्यक्तिले सपना देख्छन्। कुनै सपना याद रहन्छ भने कुनै सपना याद रहँदैन। सपनामा कोही व्यक्तिलाई आफैले त्यो अवस्थामा नै सपनामा भइरहेका काम गरे जस्तो लाग्छ भने कोहि व्यक्तिले सपना देख्छन् मात्र, आफूले प्रत्यक्ष अनुभव गर्दैनन् । कोही व्यक्तिलाई त सपना देखेको या नदेखेको भन्ने याद पनि रहँदैन। मानिस हरेक राती सुतिसकेपछि ऊ निदाउँदा तेस्रो अवस्थासम्म भएर निदाउँछ। निदाउँदा व्यक्तिको शरीर पनि काम नगरेको अवस्थामा हुन्छ । पहिलो अवस्थामा व्यक्ति आँखा बन्द गरेको मात्र हुन्छ, उसलाई आफ्नो वरिपरि के भइरहेको छ र कहाँ छु भन्ने ज्ञात हुन्छ । दोस्रो अवस्थामा उसलाई वरिपरिका कुरा थाहा नभएपनि आफू निदाइरहेको भन्ने कुराको ज्ञान हुन्छ । तेस्रो अवस्थामा व्यक्ति गहिरो निन्द्रामा हुन्छ। त्यसपछि चौथो अवस्थामा पुगेपछि व्यक्तिको आत्मा नै ऊसंगबाट अर्को दुनियाँमा सयर गरिरहेको हुन्छ,
आफ्नी आमालाई ठ’क्कर दिने कारलाई सानो बालकले ला’त्ती हा’ने…..एकपटक पढ्नै पर्ने यो घटना
काठमाडौं । संसारमा आमाका लागि सबै भन्दा प्रिय आफ्ना सन्तान हुन्छन् । सन्तानका लागि आमाले ठुला सम्झौता गर्न सक्छिन् । जब बच्चा सानो हुन्छ त्यती बेला आमा र बच्चा एक अर्काका परिपुरक हुन्छन् । आमाबीना बच्चा र बच्चाबीना आमा बस्न सक्दैनन् । त्यसैले त भनिन्छ संसारमा निस्वार्थ माया गर्ने त आमा मात्र हुन्छिन्। आफू भोकै बसेर सन्तानलाई पेटभरी खुवाउँने आमा नै हो । त्यसैले प्रत्येक छोराछोरीको पहिलो प्रेम पनि आमा हुने गर्छिन्। छोराछोरीले पनि आफ्नी आमाले दुख पाएको हेर्न सक्दैनन्। ठूलो भएपछि आधुनिक जमानामा अहिले आफ्ना आमाबुवालाई ति र स्का र गरेका उदाहरण देख्न सकिन्छ । तर छोराछोरी सानो छँदा भावनात्मक रुपमा निकै घनिष्ट रहन्छन् । हालै सामाजिक संजालमा एक भिडियो निकै भाइरल भइरहेको छ। एउटा सानो बच्चाले आफ्नो आमाका लागि गरेको कृयाकलाप समेटिएको भिडियो चर्चामा छ । भिडियोमा एउटा सानो बालकले आमाप्रति गरे
काठमाडौँ । हिन्दू धर्ममा सबै युवतीलाई माता लक्ष्मीको रुप मानिने गरिन्छ। देवीको रुपमा पूजा हुने महिलालाई कयौँ पटक आफ्नो पवित्रता देखाउनका लागि कडा तपस्या पनि गर्नुपरेको शास्त्रमा उल्लेख छ। आज हामी केही यस्ता राशिका युवतीको बारेमा जानकारी दिदैछौँ । उनीहरुलाई गंगा जस्तै पवित्र छन् भन्दा कुनै पटक पर्दैन। सुन्दरताको कुरा गर्नुपर्दा पनि यिनीहरु निकै आकर्षक देखिन्छन्। आउनुहोस् जानौँ कुन कुन हुन् ती राशि ? मिथुन राशि मिथुन राशिका युवती आफ्नो पार्टनर प्रति निकै इमान्दार हुने गर्दछन्। यिनीहरु एक पटक जोसँग प्रेम गर्छन त्यसलाई जीवनभर सच्चा मनले निभाउने गर्दछन्। यी राशिका युवतीले कहिलै पनि आफ्नो पार्टनरलाई धोका दिदैनन्। यिनीहरुको मन पनि निकै सफा हुने गर्दछ। यस राशिका युवतीले कसैको पनि दुख देख्न सक्दैनन्। मकर राशि मकर राशिका युवती पनि मनका निकै सफा हुने गर्दछन्। यिनीहरु कसैसँग पन
मेष राशिलाई व्यापार, कर्कटलाई जागिर, कुन राशिलाई कुन पेसा फलिफाप ?
काठमाडौँ । तपाईं कुनै विजिनेश सुरु गर्ने सोचिरहनुभएको छ ? वा सुरु गर्न गइरहनु भएको छ कि ? वा, कुन विषयमा प्रवेश गर्ने वा करिअर बनाउने भन्ने अलमलमा पो हुनुहुन्छ कि ? यदि छ भने तपाईंले राशिसँग जोडिएका केही कुराहरुतर्फ ध्यान दिनुभयो भने यसले ठूलो सहयोग हुनसक्छ। अझ एसएलसी उत्तीर्ण भएर आगामी दिनमा कुन विषय रोज्ने भन्ने बिलखबन्दमा रहेकाहरुका लागि यो सामाग्री अझ बढी सहयोगी बन्नसक्छ।ज्योतिष विज्ञानका अनुसार करिअर, पढाई तथा व्यापार व्यवसायको सफलताका लागि राशिको निकै महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। यदि राशिलाई ध्यानमा राखेर पढाई, करिअर तथा व्यवसाय सुरु गर्ने हो भने सफल हुने संभावना बढी हुन्छ। कुन राशिलाई कस्तो पढाई, करिअर र व्यवसाय गर्नु उत्तम मानिन्छ, आउनुहोस् हेरौं: मेष : मेष राशि भएका व्यक्तिहरुका लागि गणित, फिजिक्स र अकाउण्ट बिषयमा अधिक सफलता मिल्छ । यी व्यक्तिहरुका लागि सेना, आर्किटेक्ट, अस्त
काठमाडौँ । हिन्दू शास्त्रमा पत्नीलाई पतिको अर्धाङ्गनी मानिएको छ । पत्नीको भाग्य पतिको भाग्यमा पनि निकै ठूलो प्रभाव परेको हुन्छ । त्यसैले भनिन्छ कि विवाह पछि कुनै पनि व्यक्तिको भाग्यमा ठूलो परिवर्तन आउन सक्छ। तर, सबैको हकमा यस्तै हुनुपर्छ भन्ने छैन। कसैकसैको चाहिँ यसले झन् नराम्रो प्रभाव पारेको पनि हुनसक्छ। यदि कसैको विवाहपछि पनि भाग्य चम्किएको छैन भने यस्ता उपाय अपनाउन सकिन्छ जसले मानिसको जीवनमा ठूलो परिवर्तन ल्याउँछ। भारतका पण्डित शिवकुमार शर्माले पनि त्यस्ता उपाय सुझाएका छन् ।जसका कारण पतिको भाग्यमा पत्नीका कारण परिवर्तन आउन सक्छ। शास्त्रमा स्त्रीलाई लक्ष्मीको दर्जामा राखिएको छ। उनलाई लक्ष्मी स्वरुप मानिने गरिएको छ। त्यसैले स्त्रीले विहान सधैं पूजापाठ गर्नु राम्रो हुन्छ । यसले पतिको जीवनमा पनि ठूलो परिवर्तन ल्याउने विश्वास गरिन्छ। घरमा महिलाले विहान उठेर सबैभन्दा पह
मन्त्रालयकै गाडी भित्र यौन क्रियाकलाप गर्ने3जना पक्राउ (5650)
किन गर्दैछन् त स्वतन्त्र युवा विद्यार्थीहरु धनगढीमा MCC बिरुद्ध कार्यक्रम ? (871)
बिजय शाहि जिउँदै भेटिए (775)
जनमैत्री अस्पताल मेरो होईन- रबि लामिछाने (644)
अफगानिस्तानको राजधानी काबुलको मुख्य द्वार प्रवेश गर्ने बित्तिकै खुशीले भक्कानीए तालिवान लडाकु ( भिडियाे सहित ) (508)
असुरक्षित अफगानिस्तानमा सुरक्षा प्रदान गर्दै नेपाली गार्ड (487)
केही कुरा याद हुँदैन ? यी आठ तरिकाले बढाउनुहोस् दिमागको क्षमता (466)
वास्तु शास्त्रः यी पाँच दोष, जसले घरमा निम्त्याउँछन् गरिबी र अशान्ती (394)
१.	सुर्खेतबाट आयो दुख लाग्दो खबर – एकै परीवारका चार जनाको मृत्यु (60)
२.	कुवेतमा क्रेनको ठक्करबाट एक नेपाली महिलाको मृ’त्यु । हार्दिक श्रद्धाञ्जली (57)
३.	छिटो–छिटो पिसाब लाग्ने समस्या छ ? उसोभए आजैबाट यी खानेकुरा खान सुरु गर्नुहोस् (54)
४.	जापानमा एक नेपालीको मृ*त्यु ! मनमा अलिकति दया भए (R.I.P) लेख्नुहोस (53)
५.	आफ्नै श्रीमतीलाई मालिकसंग कोठामा ना’ ङ्गै भेटेपछि(भिडियो (52)
६.	काठमाडौंको कलंकीमा घट्यो डरलाग्दो घटना (51)
७.	त्रिभुवन विमानस्थलमा आजफेरी यस्तो भयो ! ३ करोड नेपालीको शिर निहुरियो (49)
८.	स्कुल बन्द भएपछि ठूलो संख्यामा बालिकाहरु गर्भवती हुन थाले (49)